နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက် အရေးပါသော အချိန်ကာလတစ်ခုကို ရောက်ရှိနေပြီဟု နိုင်ငံအရေး၌ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြသော ပလေယာများအားလုံးက လက်ခံထားကြသည်။ နိုင်ငံတစ်ခု၏ အနာဂတ်သည် ရှင်သန်နေသာ လူငယ်များ၏ စွမ်းဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍများအပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ်ကြသည်။
9/26/2012 08:24:00 PM
Shopping Centre ဖွင့်ရန် မန္တလေးတွင် မြေရှာမူ ဂဂမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ငြင်းဆို
သိန်းသောင်းဂဏန်းဝန်းကျင် အထက်တွင်သာရှိသော မန္တလေးမြို့အတွင်း ဂဂ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ယခုလအတွင်း Shopping Centre ဖွင့်လှစ်ရန် မြေနေရာလိုက်လာရှာဖွေနေခြင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များက ငြင်းဆိုပြောကြားသည်။
9/26/2012 08:23:00 PM
သတင်းနှင့် ဆောင်းပါးများမှ ကောင်နှုတ်ချက်များ
နံပါတ်တစ် လုပ်ရမှုာတော့ ဥပဒေနဲ့ အရေးယူမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ဘာ့ကြောင့် လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူ ဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ကြည့်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် လခမလုံလောက်လို့ဆိုရင် လခနဲ့လောက်အောင်လုပ်ပေးရမယ် လို့ဆိုတယ်၊အရေးကြီးဆုံးအချက် ဖြစ်တဲ့ နဂိုရှိရင်းစိတ် Read more »
9/26/2012 08:22:00 PM
ပြည့်တန်ဆာအလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးမူပြုလုပ်သူများကို စုစည်း၍ အသင်းတစ်ခု ဖွဲ့စည်းကာ ဖိနှိပ်ခံရမှုများကို ကူညီဆောင် ရွက်သွားရန် စီစဉ်မူများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိတွင် Sex Worker In Myanmar Network အမည်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်နေသူ မနှင်းနှင်းယုကပြောကြားသည်။
9/26/2012 08:21:00 PM
ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု CID သို့ လွှဲပြောင်း
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၅။
လူ ၅ဦးကို သေနတ်ဖြင့် ဝင်ရောက် သတ်ဖြတ်သွားသောအမှုကို ယနေ့တိုင် စုံစမ်းလျက်ရှိပြီး CID သို့ လွှဲပြောင်း ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သူ ရဲမှူးမြင့်ထွေးက စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်
9/26/2012 08:20:00 PM
KIA မှ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦး၏ စီးပွားရှာပုံ
တပ်မဟာ(၂)လက်အောက်ခံ ရင်း(၁၄)မှ တပ်ကြပ်ကြီး ဂွန်ဂျာသည် အင်အား(၁၀)ဦးခန့်ဖြင့် မြစ်ကြီးနား-တနိုင်း
ကားလမ်းပေါ်တွင် ဂိတ်ပြုလုပ်၍ ဖြတ်သွားသော ဆိုင်ကယ်များနဲ့ ကားများကို ရပ်တန့်ပြီး စစ်ဆေးခြင်း၊
ရှာဖွေခြင်းများအား ဟန်ပြလုပ်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းခံလျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖားကန့်တွင် KIA ၏ လက်နက်ကြီးဒဏ်ကြောင့် ရွာသား(၃)ဦး ဒဏ်ရာရ
နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိုင်းအောင်ရွာထဲသို့ဝင်လာသော အစိုးရစစ်ကြောင်းကို
KIA မှ လက်နက်ကြီးများနှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုလက်နက်ကြီးများသည် ဆိုင်းအောင်ရွာတွင်းသို့
ကျရောက် ပေါက်ကွဲကာ ရွာသား(၃)ဦး အပြင်အထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဖားကန့်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့
ကချင်အဖွားအိုတစ်ဦးမှ KDN သို့ ပြောပြချက်မှာ `` မနေ့ နေ့လည်က KIA တွေက ဗမာစစ်တပ်ကို
9/26/2012 08:17:00 PM
"ဂျိမ်းစ်ဘွန်း မင်းသားကြီး ရော်ဂျာမိုး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရန် ရည်ရွယ်ထား"
တတိယမြောက် ဂျိမ်းစ်ဘွန်း မင်းသား အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ခဲ့သူ မင်း သားကြီး ဆာရော်ဂျာမိုး က ၄င်း ၏ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေ ခရီးစဉ် အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ ကို ရွေးချယ် ထားပြီး မြန
်မာ့ ဒီမို ကရေ စီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံသွားမည် ဟု တယ်လီ ဂရပ် သတင်း စာ ၏ ခရီးသွား ကဏ္ဍ မေး မြန်းခန်း တွင် ဖြေကြား ထားသည်။
9/26/2012 08:14:00 PM
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကာလ သံဃာတော်များက လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို လက်အုပ်ချီ တောင်းပန်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
အစိုးရ အာဏာပိုင်များက ရဟန်းသံဃာတော်များအပေါ် အပြစ်ကျူးလွန်ကြောင်း ၀န်ခံပြောကြားလာပါက ပတ္တနိကုဇ္ဇန ကံဆောင် သပိတ်မှောက်ထားမှုကို ကမ္မ၀ါဖတ်၍ ကံလှန်နိုင်ရန် ကမ်းလှမ်း ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
9/26/2012 08:12:00 PM
ထိုင်း နှစ်ဦးအား ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည်များ ချမှတ်လိုက်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမဝင် ခိုးဝင်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှု၊ သစ်တောကျူးကျော်မှုနှင့် လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုတို့ဖြင့် ဇူလိုင်လအတွင်းက ဖမ်းဆီးထားခဲ့သော ထိုင်းနိုင်ငံသား နှစ်ဦးကို ကော့သောင်းခရိုင် တရားရုံးမှ အင်္ဂါနေ့က နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်သည်။
9/26/2012 08:10:00 PM
အကျဉ်းသား ရိုက်နှက်မှုဖြင့် ပဲခူးထောင်မှူးအား အရေးယူမည်ဟုဆို
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပဲခူးထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် ဦးလှမိုး အား ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်မှုဖြင့် ထောင်မှူး ဦးကျော်စွာသင်း အား ထိရောက်စွာ စစ်ဆေးအရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနိုင်ဝင်း က ကတိပေးခဲ့သည်ဟု ဦးလှမိုး ၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်ကြည်ချို က
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူက စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က ပဲခူးထောင် ညွှန်မှူး ဦးနိုင်ဝင်း၊ ဦးစီးအရာရှိ ဦးသိန်းစိုး၊ ထောင်ပိုင် ဦးဝင်းတင် တို့နှင့် တွေ့ဆုံတိုင်ကြားရာမှ ညွှန်မှူးက ကတိပေးပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းသည် နိုင်ငံတော်အဆင့် စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ရပ်နားမည် မဟုတ်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းသည် နိုင်ငံတော်အဆင့် စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ရပ်နားမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒေသခံများနှင့် အတတ်နိုင်ဆုံး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေစေရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံများ နစ်နာမှုများကို တရားဝင်စာတင်၍ တောင်း ဆိုနို င်ေ ကြာင်း၊ မိမိတို့ဘက်မှ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည် များကို ဆောင်ရွက်ေ ပးမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပို င်းက ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းထောက်များအား လက်ပံတောင်းတောင် သို့ ခေါ်ယူရှင်းလင်း သည့်ပွဲတွင် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက် မှ တာဝန်ရှိ သူ များက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
9/26/2012 08:08:00 PM
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ တကသ အဆောက်အအုံပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့ရဲ့ နဝမအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ တကသ အဆောက်အအုံပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့ရဲ့ နဝမအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဒီကနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများအသင်း ခေါင်းဆောင်ေ တွလည်းပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
9/26/2012 08:05:00 PM
“ မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိ ဆိတ်သားလုပ်ငန်းရှင်အချို့ စည်ပင်သာယာဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ နွား ပေါက်ငယ်များအား ဆိတ်သားအဖြစ် ရောနှောရောင်းချလျက်ရှိ ”
မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိ ဆိတ်သားလုပ်ငန်းရောင်းချ လုပ်ကိုင်သူအချို့သည် စည်ပင်သာယာ
ဌာနရှိ သားသတ်အုပ်ဆိုသူနှင့် ပူးပေါင်းကာ နွားပေါက်ငယ်များအား သတ်ဖြတ်လျက်
ဆိတ်သားအ ဖြစ်ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း မြ၀တီရပ်ကွက်ရှိ သားသတ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ “ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ နွားမေတ္တာစာကြောင့် မုံရွာဒေသခံအချိုးက အမဲသား လုံးဝမစားကြပါဘူး။ အခုလို ဆိတ်သားဆိုပြီး အမဲသားတွေရောနှောရောင်းချနေခြင်းဟာ ဘာသာတရားအရ အမှားအယွင်းတစ်ခုကိုကျူးလွန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု လယ်တီကျောင်း တိုက်မှ သံဃာတော်တစ်ပါးက
9/26/2012 08:03:00 PM
တိုင်းမှူးဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည် သိမ်းယူခဲ့သော လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာ
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ၀က်ဝံကျွေးရွာမှ လယ်ယာမြေ (၁၈၆)ဧကကို တိုင်းမှူးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည် မှ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ထံက သိရှိရသည်။
၀က်ဝံကျးရွာ၊ ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး၊ သက္ကံချိန်ကျေးရွာတွေမှာ ဒီလ ၂၄. ၂၅. ၂၆ ရက်နေ့တွေမှာ စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တော့ ဒီမှာလည်း လယ်ယာမြေတော်တော်များများ သိမ်းဆည်း ခံထားရတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။"ဟု လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှု စုံစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ(၄)မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူက ပြောသည်။
9/26/2012 08:01:00 PM
ကွမ်းတံတွေးကိစ္စဖြေရှင်းရန် အထူးအစီအစဉ်မရှိဟု ရန်ကုန်စည်ပင်ဆို
ကွမ်းတံတွေး ထွေးသည့်ဖြစ်ရပ်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အမျိုသားယဉ်ကျေးမှုအပါအ၀င် စည်းကမ်းရှိမှုနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
9/26/2012 07:58:00 PM
ပုဂံနန်းတော်ရာတွင် အနှိပ်ခန်းထည့်သွင်းမည်ကို ဒေသခံများ လက်မခံ
ပြုလုပ်မည့် ပုဂံမြို့ဟောင်းနန်းတော်ရာအထဲတွင် စားသောက်ဆိုင်နှင့် ရိုးရာအနှိပ်ခန်းများထည့်သွင်းရန် ဆောက်လုပ်မည့်ကုမ္ပဏီက စီစဉ်နေသည့်အပေါ်တွင် ဒေသခံများနှင့် လူမှုအရေး အဖွဲ့အစည်းများက လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
(၂၅/၂၆-၉-၂၀၁၂) နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ရသေ့တောင်မြို့ ညီလာခံမှ တောင်းဆိုချက်၊ ကန့်ကွက်ချက်များနှင့် နောက်ဆုံးအဖြေ
(၂၅/၂၆-၉-၂၀၁၂) နေ့များတွင် ရခ်ိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့တွင်ကျင်းပသော ရခိုင်ဒေသလူထုအစည်းအဝေး က နိုင်ငံတော် အစိုးရသို့ တင်ပြတောင်းဆိုချက်များ
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက် ရခိုင်နယ်စပ်ဒေသနှင့် တရားမ၀င်ခိုးဝင်သူ များရှိနေပါ၍ပင်လယ်ြ ပင်နှင့် နယ်စပ်အား လုံခြုံရေးကို အခိုင်အမာတည်ဆောက်ပေးပါရန်။ ၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နည်းပါးနေသည့်ရခိုင်လူဦးရေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ရန် ရခိုင်ဒေသတွင် စီးပွါးရေးဇုံများကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နိုင်ငံတော်မှအပြည့်အ၀ ကူညီပေးရန်။
9/26/2012 07:54:00 PM
ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်မျှတမှု ပိုမိုရှိစေရန် ဆွေးနွေး
၂၆၊၉၊၂ဝ၁၂ နေ့လည် ၁း၁၅ မှ ၃း၄၅ အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အစည်းဝေးခန်းမ တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊တိုင်းဒေသကြီးေ ရွးေ ကာက် ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကို၊အဖွဲ့ဝင် ဦးချစ်နိုင်၊ဦးခင်မောင်ထွန်း၊ဦးကျော်၊ဦးရဲမြင့် ။
9/26/2012 07:48:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ယိမ်းယိုင်နေပြီး မန္တလေးမြို့တွင် ပြိုကျသွားပြီဟု တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီဝင်က ပြောကြား ၂ဝ၁၂၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၆။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ယိမ်း ယိုင်နေပြီး မန္တလေးမြို့တွင် ပြိုကျ သွားပြီဟု တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီဝင် ဦးသိန်းညွန့်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးရှေ့ တွင သတင်းမီဒီယာများကို ပြော ကြားခဲ့သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေး ချမ်းရေးကော်မတီမှ ကော်မတီဝင် ၅ ဦးသည် တရားရေးအဖွဲ့အစည်း များမှ တရားဥပဒေနှင့်အညီ နေထိုင် ပြုမှု ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် နှိုးဆော်ခြင်း၊ Read more »
9/26/2012 07:39:00 PM
အပြောင်းအလဲ အတွက် အင်တိုက်အားတိုက် စည်းရုံးနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောချက်ကို အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေက စိတ်ပါဝင်စားကြတယ် (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေး အောင်မြင်ပြီလို့ နိုင်ငံတကာ မိသားစုက မကြေညာနိုင်သေးဘဲ အာဏာ ဘယ်သူပဲရရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ မျှော်လင့်တဲ့အပြင် သမိုင်းတွင်မယ့် မြန်မာ့အပြောင်းအလဲဟာ “စိန်ခေါ်မှုမဲ့” မဟုတ်ဘူးလို့ အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့တ်ကမ်းဘဲလ်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
9/26/2012 05:51:00 PM
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ၂၀၁၁ ခု ဩဂုတ်လထဲ ပထမဆုံးအကြိမ် နေပြည်တော်သမ္မတရုံးမှာ စတွေ့ပြီး ဓာတ်ပုံထွက်လာတော့ လူတွေက ပျော်ကြတယ်။ မြန်မာပြည် ရှေ့ရေး ကောင်းလာတော့မယ် ပေါ့။ တကယ်လည်း အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လေ။
ရန်ကုန်သို့ ရေပေးဝေသည့် ချိုးဖြူပိုက်လိုင်းမှ ရေခံယူနေသည့် အမျိုးသမီးတဦး (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
လှော်ကား ရေပိုက်လိုင်း ပေါက်ခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၆ မြို့နယ်ရေ ၃ ရက်ကြာ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ သဖြင့် ချိုးရေ၊ သုံးရေများအတွက် သောက်ရေသန့် ဘူးများကို ဈေးအဆ မတန် ပေးဝယ်ကာ အသုံးပြုခဲ့ရကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးက ဧရာဝတီတိုင်း၏ လွှတ်တော် အမတ်များနှင့် တိုင်းလွှတ်တော် တာဝန်ရှိသူများကို ပြစ်တင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခြင်းများ မပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
9/26/2012 05:46:00 PM
အာဃာတမဲ့ကျည်ဆန်များရဲ့အဆုံးသတ် “လူငယ်အချိန်မှာ ခွန်အားများကို အားကိုးလျက် ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာကို ဇွတ်လုပ်ချင်တဲ့ မာန်၊ ရန်ကိုရန်ချင်း တုံ့ပြန်ချင်တဲ့ သဘော၊ ကိုယ့်လူမျိုးမှ ကိုယ့်လူမျိုး အစွန်းရောက်တဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်၊ အားလုံးအတွက် ပေးဆပ်ရမှာကတော့ သေဒဏ်နှင့် ၂၄ နှစ်ပင် ဖြစ်တော့သည်” ယင်းစာစုပါ ဆောင်းပါးလေးအား တစ်ချိန်က ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KIA)၏ ကွန်မန်ဒိုဟောင်း ကိုလဖိုင်ဇော်ဆိုင်းတစ်ယောက် ထောင်တွင်း၌ရှိနေစဉ် ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
9/26/2012 05:45:00 PM
နေပြည်တော်ဟိုတယ်များတွင်Presidential Suite ထည့်သွင်းရမည်
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ နေပြည်တော်တွင် အဆင့်မြင့် ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရာ၌ နိုင်ငံတကာက တက်ရောက်လာမည့် ကိုယ်စားလှယ်များ တည်းခိုနိုင်ရန် နေပြည်တော် ဟိုတယ်တိုင်းတွင် Presidential Suite (အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် သီးသန့် အခန်း) အခန်း စုစုပေါင်း ၂၁စုံ ကို တည်ဆောက်ပြီး ဟိုတယ်နှင့် တည်ဆောက်ဆဲ ဟိုတယ်များ အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တွင်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ အပြီးသတ်ရန် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်က ပြောကြားသည်။
9/26/2012 05:01:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံ အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့် တိုးတက်လာ ဟု အမေရိကန် စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြ ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့် တိုးတက်လာကြောင်း အမေရိကန် အခြေစိုက် Freedoom House ၏ ၂၀၁၂ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်သည့် “Freedom on the Net 2012”တွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
9/26/2012 05:00:00 PM
မေ့မြောနေရာမှ သတိပြန်ရလာသည့် အမျိုးသမီး ၁၃ နှစ်ကြာ မှတ်ဉာဏ်များပျောက်ဆုံး ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် ကိုမာဝင်ကာ မေ့မြောနေပြီးနောက် ပြန်သတိလည်လာချိန်တွင် (၁၃)နှစ်ကြာ မှတ်ဉာဏ်များ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အသက်(၃၂)နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကလေး(၃)ဦး၏ မိခင်ဖြစ်သော ဆာရာသွမ်ဆင်သည် သူမနိုးထလာချိန်တွင် (၁၉၉၈)ခုနှစ်ဆီက မှတ်ဉာဏ်များထံ ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားသည်။ သူမကိုယ်သူမ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးဟု ထင်မှတ်နေပြီး ခင်ပွန်းသည်ကိုလည်း မမှတ်မိတော့ချေ။ သူမသည် Spice Girlsအဖွဲ့ မပြိုကွဲသေးဘဲ
ကမ္ဘာသိ အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေဆဲဟု ထင်မှတ်နေသလို မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် သေဆုံးသွားသည်ကိုလည်း မသိရှိတော့ဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။
9/26/2012 04:59:00 PM
ကျောတစ်ခင်းစာ တိုက်ပွဲနှင့် ဆေးမရှိသေးသည့် အိမ်ကိုက်နာ
ဒီအချိန်က သူတို့ဘဝအတွက် အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဟု အီလက်ထ ရောနစ်Show Room သာ တစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်သော အသက် ၂၇ နှစ်ရှိ ကိုမိုးကျော်(အမည်လွှဲ)က ပြော သည်။ နောက်လဆိုလျှင် တိုက်ခန်း ငှားထားသည့် ခြောက်လစာချုပ် ပြည့်ပြီ။ ဆက်ငှားလိုပါကမူလဈေး ခြောက်သောင်းမရတော့။ တစ် သောင်းတိုးကာ ခုနစ်သောင်းပေး
နိုင်လျှင် ဆက်ငှားမည်ဟု ပိုင်ရှင်က ရာဇသံထုတ်ထားသည်။ တစ်ပူပေါ် တစ်ပူဆင့်ပြန်သည်က တစ်နှစ်နီးပါး။ သူတို့လင်မယားနှင့်အတူ စပ်ပေါင်း ငှားနေသော လင်မယားက သီးခြား ခွဲနေတော့မည့်အကြောင်း ဆိုင်း မဆင့်ဗုံမပါ ကြေညာသည်။
ရွှေပြည်သာမှ မသန်စွမ်းအမျိုးသမီး အဓမ္မကျင့်ခံရမှု ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
ရွှေပြည်သာ ၈ ရပ်ကွက်နေ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ မသန်စွမ်း ဥာဏ်ရည်နိမ့်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး အဓမ္မကြံစည်ခြင်းခံခဲ့ရမှုအပေါ် တရားဥပဒေ အတိုင်းသာဖြစ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူမ
ျားအသင်းက ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ကာ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်သည်။
9/26/2012 01:27:00 PM
သွယ်လျ လှပချင်သူတို့အတွက် ဗိုက်သားလှုပ်အက
အခုတစ်လောအိမ်က ကလေး တွေက Hip Hop သစ သီချင်းေ တွ နား ထောင်ကြလို့ သမီးတို့က ဘာကြောင့် ဒီ Hip Hop သီချင်းတွေကြိုက် တာလဲ မေးလိုက်တော့၊ သူတို့လေးတွေက သီချင်းဆို တာအပြင် ဆိုသူများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကြိုက်ကြောင်း ဖြေကြပါတယ်။ ဟုတ်မှာပါ။
9/26/2012 12:21:00 PM
တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူအတုများပြုလုပ်၍ မန္တလေးမြို့တွင် လိုက်လံအသုံးပြုနေသူများကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ
တစ်သောင်းကျပ်တန်ငွေစက္ကူ အတုများပြုလုပ်၍ မန္တလေးမြို့အတွင်း လိုက်လံအသုံးပြုနေသူများကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်း မန္တလေးမြို့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ သိရှိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့နေသူ မောင်ပြုံးချိုသည် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူအတုကို အသုံးပြုခဲ့ရာမှ မသင်္ကာ၍ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဧရာထွန်း၊ ဆ/၁ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ နေ အိမ်၌ ငွေစက္ကူအတုပြုလုပ်ရာ တွင်အသုံးပြုသည့် စက္ကူပရင်တာစက် တစ်လုံး၊ ကွန်ပျူတာလက်တော့ပ် တစ်လုံး၊ တစ်သောင်းကျပ်တန်ငွေစက္ကူအတု ၂၄ရွက်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
9/26/2012 12:08:00 PM
အခုတစ်လောအိမ်က ကလေး တွေက Hip Hop သစ သီချင်းတွေနား ထောင်ကြလို့ သမီးတို့က ဘာကြောင့် ဒီ Hip Hop သီချင်းတွေကြိုက်တာလဲ မေးလိုက်တော့၊ သူတို့လေးတွေက သီချင်းဆိုတာအပြင် ဆိုသူများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကြိုက်ကြောင်း ဖြေကြပါတယ်။ ဟုတ်မှာပါ။
9/26/2012 11:22:00 AM
နိုင်ငံတွင် နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ပြန်ရောက်လာသော ကလေး
၂ ဦးနှင့် လိုက်ပါပို့ဆောင်သူများ (ဓာတ်ပုံ – အောင်သက်ဝိုင်း / ဧရာဝတီ)
9/26/2012 11:21:00 AM
မြန်မာပြည်ထဲ အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်လာ ကြမယ့် ပြည်ပဧည့်သည်များအတွက် ဟိုတယ်ခန်း လုံလုံေ လာက်ေ လာက် ရှိစေရေး ရည်ရွယ်တဲ့ စီမံကိန်းတခု လာပါပြီ။ တံတားဦးမြိုနယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မန္တလေးမြို့သာ ကားလမ်းရဲ့ မြောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းအထိ ဧရိယာမြေ ဧက ၃.ဝဝဝ ခန့် နေရာကို ဟိုတယ်ဇုန် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဆောက်လုပ်မယ် လို့ မန္တလေးမြို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။
9/26/2012 11:19:00 AM
ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်စက်ရုံ အစားထိုးလောင်စာ သုံးရန် သုံးပါတီတောင်းဆို
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကော့သောင်းမြို့ရှိ ကျောက်မီးသွေး လောင်စာသုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံကို အစားထိုး လောင်စာဖြင့် လည်ပတ်ပေးရန် ဒေသခံ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက တနင်္လာနေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရသို့ တင်ပြထားကြောင်း ဦးဆောင်ပါဝင်သူများက ပြောသည်။
9/26/2012 11:17:00 AM
အစိုးရအဖွဲ့ထဲက တာဝန်ရှိသူတွေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ အားနည်း ဟု BBC ဝေဖန်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ အသက် ၆၇ ကျော်လို့ အသက် ၆၈ နှစ်တွင်း ချင်းနင်းဝင်ရောက်နေပေမယ့်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ သွားတာလာတာမှာ မီဒီယာသမားတွေတောင် ဖမ်းရခက်လောက်အောင် မြှားတစင်းလို သွက်လက်လွန်းလှပါတယ်။ တခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကားလို သွက်လက်ချက်ချာစွာနဲ့ အဆင့်တန်းမြင့်စွာ ပြောဆိုနိုင်တာမို့ အင်္ဂလိပ်စကားတတ်သူ လူကြီး/လူငယ်မရွေး ပွဲကျနှစ်ခြိုက်ကြပြီး ကြားသိပြီး
ခင်မင်နေသူတွေက မြင်တွေပြီးနောက်မှာ ပိုသဘောကျသွားကြပါတယ်။ တခုပဲ ရှိတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနားနေတွေက မီဒီယာတွေနဲ့ စိတ်ရှည်၊ သည်းခံမှု/ ရင်းနှီးမှုမှာ
9/26/2012 11:16:00 AM
အလုပ်အ ကိုင်တစ်ခုလျှောက်ထားရာတွင်သော် လည်းကောင်း၊ စာရွက်စာတမ်းပျောက် ဆုံးရာတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာသယ်ယူရာတွင်သော်လည်း ကောင်း၊ ပညာသင်ကြားရာတွင်သော် လည်းကောင်း မလိုလားအပ်သောထောက် ခံချက်၊ ထောက်ခံစာများတောင်းတတ်ခဲ့ သော အလေ့အထတစ်ခုခေတ်စားခဲ့ဖူး ပါသည်။ ထိုအလေ့အထသည် ခေတ်နှင့် လျော်ညီစွာ ပျောက်ကွယ်မသွားခဲ့ဘဲ ဆက်လက်ပါလာခဲ့လေသည်။ Read more »
I Phone5နဲ့ ၁၅ သိန်းကတ် အ၀င်ခက်နေ
ဈေးကွက်၌ အသစ်ရောက် လာသည့် I Phone5သုံးစွဲရန် အတွက် (၁၅)သိန်းတန် GSM ကိုင်ဆောင်ထားသူများ ဆင်းကတ် ခက်အခဲရှိနေကြောင်းသိရသည်။
ပြည်တွင်း၌ I Phone5မှာ ငါးသိန်းနှင့် နှစ်သိန်းတန် GSM ဆင်းကတ်များဖြင့်သာ သုံးစွဲရန် အဆင်ပြေပြီး ယခင်(၁၅)သိန်း GSM များဖြင့် သုံးစွဲ၍ မရနိုင်ဘဲ ဆင်းကတ်လဲလှယ်ရန် လိုအပ် မည်ဟု Read more »
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ၀န်ကြီးချုပ်ယင်လပ် နှင့် နယူးယောက်တွင် တွေ့ဆုံမည်ဟုဆို
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ သို့တက်ရောက်ရန် အတွက် ပြည် ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် သည် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ တွင် နယူးယောက်သို့ ရောက်ရှိ သည်။ အစီအစဉ်အရ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးသည် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၌ မိန့် ခွန်းပြောကြားမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ တွင် အီရန်သမ္မတ အာမက်ဒီနီ ဂျက်၊ အီဂျစ်သမ္မတမော်စီတို့ မိန့် ခွန်းပြောကြားကြမည်ဟု သိရ သည်။
9/26/2012 11:11:00 AM
စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့်မတွေ့ဟူသောသတင်း လုံးဝမှားယွင်းဟု ဇာဂနာပြော
ပြည်ပသတင်းမီဒီယာများနှင့် လူမှုရေးကွန်ရက်တို့တွင် ရေးသားဖော်ပြနေကြသော စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် မတွေ့ဆုံခဲ့ဆိုသော သတင်းအချက်အလက်မှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လွဲမှားကြောင်း စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ကိုဇာဂနာကပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ရွှေရင်အေးရွာကအပြန် ညောင်ချောင်းရွာ (မောင်တောမြို့နယ်)မှာ တစ်နာရီလောက် ကားရပ်ပြီး ကိုကိုကြီး Read more »
9/26/2012 11:10:00 AM
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် သမ္မတက လက်မှတ်မထိုးဘဲ လွှတ်တော်သို့ ပြန်လွှဲ
အတည်ပြုပေးလိုက်သော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အတည်ပြုလက်မှတ်မထိုးဘဲ အချက်အလက်အချို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရန် လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တစ်ဦးကပြောသည်။
9/26/2012 11:08:00 AM
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအား စွပ်စွဲပြစ်တင်မည် အောက်တိုဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအပေါ် စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုလ ၂၄ ရက်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည့် အထူးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်းဆင့်ကပြောသည်။
9/26/2012 11:06:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှုသည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း CNN သတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျမှုသည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က အရပ်သားများကို ပေးအပ်သည့် ဆုများအနက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် Congressional Gold Medal ဆုကို လက်ခံရယူရန်
စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ ရောက်ရှိနေ စဉ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က CNN နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ထိုသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
9/26/2012 11:05:00 AM
မြန်မာ့တိုးတက်မှု Kurt Campbell ဆွေးနွေး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မနေ့က စ ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနဲ့ မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေး ဌာန CSIS မှာလုပ်တဲ့ ဒုတိယနေ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေး အလားအလာကောင်းတွေ ဖြစ်ထွန်းနေမှုကို အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kurt Campbell က ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါတယ်။
9/26/2012 11:03:00 AM
အစိုးရတပ်နဲ့ ကချင် သူပုန် KIA တိုက်ပွဲ အရပ်သားပြည်သူ ၃ ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရ
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူ(ဆိုင်းတောင်) ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်မှော်၊ ဆိုင်းအောင်နဲ့ မှော်လကင် ၃ရွာကြားမှာ မနေ့က နေ့လည်ပိုင်းမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ KIA တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ
့တဲ့ အတွက် အရပ်သား (၃) ဦး မိုင်းထိမှန်ကာ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက
မနေ့ကနှစ်ဘက်တပ်တွေ တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီး အရပ်သားပြည်သူ ၃ ဦးရဲ့ ခြေ၊ လက် နဲ့ နောက်ကျောဘက် လက်ပျဉ်တွေကို မိုင်းထိမှန်တဲ့ အတွက် ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အကြောင်း၊ ဖားကန့်မြို့နယ် ဆေးရုံမှာ အတွင်းလူနာအဖြစ် ကုသနေရပြီး မြစ်ကြီးနားဆေးရုံကို လွှဲပြောင်းဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
9/26/2012 11:02:00 AM
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ထူးခြားသော သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကျော်ခန့်
သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သည့် သုံးလေးလခန့်က စဉ်းစားကြည့်လျှင်ပင် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်း သည်ပြောနိုင်သည်။ သို့သော် ယင်းသည် စက်တင်ဘာ ၂၀ရက်ညတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။တိတိကျကျဆိုရသော် ထိုနေ့ည ရှစ်နာရီ ရုပ်မြင်သံကြား သတင်း တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
9/26/2012 10:59:00 AM
လိုင်စင်အတွက်ဆိုင်ကယ်တန်းစီတဲ့နေရာမှာ အရှေ့ဆုံးက (၁ဝ)စီးစာနေရာကို အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ အတွက် ပေးထား ဝန်ထမ်းတွေက လိုင်စင်ရှိပြီးသား ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့တန်းစီထားပြီး နေရာကို ငွေနဲ့ပြန်ရောင်းနေတာ တစ်ကယ်လိုင်စင်မရှိတဲ့သူတွေကျတော့ အဲ့ဒီအတွက်ငွေပိုကုန်နေ
ကျောက်မဲမြို့ရှိ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ပြုလုပ်ပေးရာတွင် လိုင်စင်ဖိုးအပြင် ဆိုင်ကယ်စောင့် ခနှင့် နေရာဝယ်ယူခများပြားနေသည့်အတွက် အခြေခံလူတန်းစားများအနေဖြင့် ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ပြုလုပ်ရန် အခက်တွေ့နေကြောင်း
9/26/2012 10:57:00 AM
DKBA မတော်တဆ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရွာသားတဦး ဒဏ်ရာရ။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်-DKBA ၏ မတော်တဆ ပစ်ခတ်မှု ကြောင့် ထီးသဲလယ်ရွာသားတဦး
ညာဘက်ခြေသလုံး တွင် ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်၊ မနက် ၇နာရီကျော်က DKBA ကလို့ထူးဘော လက်အောက်ခံ အမှတ်(၉၀၉)တပ်ရင်းမှ တပ်စုမှူး ဗိုလ်စောနေရော့ (ခေါ်) စောကျော်ဝါးသည် ၎င်းတို့အဖွဲ့ သွားလာရန် ပို့ဆောင်ခိုင်းသည့် ထော်လာဂျီမှာ ဘီးပေါက်နေသည်ကို M-16 သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် ရာ အသက် ၂၂နှစ်အရွယ် ထော်လာဂျီပိုင်ရှင် ရွာသား စောဒူးဒူ၏ ခြေထောက်ကို ထိမှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
9/26/2012 10:54:00 AM
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရောက်ရှိနေသည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရတ် အိုဘားမားတို့သည် ၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ ခရီးစဉ် အနေအထားများအရ တွေ့ဆုံရန် အခြေအနေ မရှိ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရောက်ရှိနေသည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရတ် အိုဘားမားတို့သည် ၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ ခရီးစဉ် အနေအထားများအရ တွေ့ဆုံရန် အခြေအနေ မရှိတော့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်က ပြောကြားကြောင်း BBC Burmeseသတင်းဌာန၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ရေးသားဖော်ပြသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း BBC Burmese က ဆက်လက် ဖော်ပြသည်။
9/26/2012 10:50:00 AM
သင် ဝိတ်လျှော့ နေပါသလား၊ ဝိတ်လျှော့ချင်လို့ စားချင်တာ မစားရဘဲ စိတ်ညစ် နေပါသလား။ အရသာလည်းရှိပြီး ဝိတ်လျှော့ခြင်းကို အထောက်အကူပေးမယ့် နေ့လယ်စာ တစ်မျိုးကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ ကယ်လိုရီ အနည်းငယ်သာ ပါဝင်တဲ့ ယခုဟင်းလျာကို The 21-Day Wonder Diet စာအုပ်မှ ထုတ်နုတ် တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း
ပုံမှန်လုပ်ရင်း၊ အစားအသောက်လည်း ပုံမှန်ထိန်းရင်းနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အိပ်မက်ကို မက်ခွင့်ရပါစေ။
9/26/2012 10:48:00 AM
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှု အိုဘားမား ချီးကျူး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့မှာ အင်္ဂါနေ့က စတင်ကျင်းပတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ အတွင်း အမေရိကန် သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမား က မြန်မာနိုင်ငံက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အားတက်စကား ပြောဆိုသွားပါတယ်။
9/26/2012 08:29:00 AM
သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်` လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးသိန်းစိန်ကို လေယာဉ်အကြာကြီး စီးခဲ့ရလို့ ခရီးပန်းနေလား၊ အဆင်ပြေလားလို့ မေးမြန်းတော့ သမ္မတကြီးက နေ့/ည မှားနေလို့ အနားယူချင်နေကြောင်းကို ပြောပါတယ်။ သမ္မတကြီးကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ``မစု... ပိန်သွားတယ်`` လို့ ပြန်ပြောတဲ့ အကြောင်း သူတို့နှစ်ဦးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ သမ္မတနဲ့ အတူ အမေရိက ခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါလာတဲ့ မီဒီယာသမားတဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
လာရောက် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်တာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ ရင်းရင်းနီးနီး ကြိုဆိုဖို့ ပြင်နေတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ ၁၅ မိနစ်ကြာ ရင်းနှီး နွေးထွေး စွာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘီဘီစီက တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးကြည့်တော့ ``သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်``
လို့ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုတိုတုတ်တုတ် ဖြေကြားသွားပါတယ်)။
9/26/2012 08:17:00 AM
9/26/2012 08:11:00 AM